PARLEMANTERA MOVANSY RAVALOMANANA : Tsy hakatoavan’ny rehetra io fifidianana io – MyDago.com aime Madagascar
Nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny cafeteria Tsimbazaza ny maraina teo ireo parlemantera movansy Ravalomanana. Ny mahakasika ny raharaham-pirenena indrindra ny momba ny fanapahan-kevitry ny CES nanala ny kandidà Lalao Ravalomanana no niompanan’ny fanazavana tamin’izany. Ny Ct Randrianjatovo Henri dia nanambara fa izahay movansy Ravalomanana dia tsy nitsahatra nitaky ny hisian’ny fifidianana mangarahara tsy mitongilana, demokratika. Nitranga anefa ny fanapahan-kevitra ka tsy tao ny kandidà natolotray. Manoloana izay hoy izy dia tsy azo ekena izany. Mikaikaika daholo ny olona hoy Henri ny hoe maninona ny fikambanana iraisam-pirenena no mandidy sy manapaka eto amin’ny firenena. Ny antony namoahan’ny CES iny lisitra iny hoy izy dia tsy nisy fandinihana ny antontan-taratasy tao fa tsy maintsy izay voalazan’ny frantsay sy ny manodidina azy no natao ka nahatonga ny kandidànay Lalao Ravalomanana tsy tao. Raha dinihana ny ao anaty lisitra hoy ity olomboantendry ity dia nisy tokoa ve ny fanapahan-kevitra satria ao anatiny ao, raha raisina tsirairay ireo kandidà dia inona avy ny momba azy, raha tsy hiteny afa-tsy hoe 90% tsy misy madio eo anatrehan’ny lalàna. Noho izany hoy izy dia tsy mipetraka amin’ny maha demokratika, sy tsy misy fanilikilihana ny fanapahan-kevitry ny CES. Ny Ct Rarison Hilarion dia nilaza fa mazava ny tarigetran’ny movansy Ravalomanana dia ny fifidianana madio, mangarahara, tsy misy fanilikilihana. Ny tondrozotra no nidiranay ao anatin’io hoy izy ka nisian’ny fiaraha mitantana. Ny filoha Ravalomanana no nanendry anay tao ka raha androany dia androany izy no miteny hoe miala tao dia miala izahay. Ny antony dia takianay ny fifidianana iarahan’ny rehetra manao, ary takianay mba hisian’ny fitoniana aloha ny fampihavanam-pirenena, ny diniky samy Malagasy satria mampalahelo loatra ny zavatra misy eo amin’ny firenena Malagasy amin’izao fotoana izao noho ny tery vay manta ataon’ny iraisam-pirenena. Ny Ct Raveloson Constant dia nanazava fa mialoha ny hitenenan-dRajoelina androany ho an’ny firenena dia mba miteny ihany koa izahay mba ho henon’ny iraisam-pirenena izay teneninay. Ny ateraky ny raharaha entin’ny Chissano sy ny CES hoy izy dia tsy hakatoavan’ny rehetra araka ny heveran’ny rehetra azy ny fifidianana. Ny mampihomehy hoy izy dia tian-kano tsy tian-kano ataon’ny mpanongam-panjakana ny teo aloha ary ity indray dia tian-kano tsy tian-kano ataon’ny olona any ivelany. Mba tsy hitenenana ratsy momba an’I Chissano hoy Constant na amin’ny fiainan’ny manokana fa ny tantarany tamin’izy teo fitondrany no nahatonga izany. Ny fanjakana nidiran’ingahy Chissano hoy izy dia fanjakana noraisana tamin’ny fitaovam-piadiana ary notazonina tamin’ny fitaovam-piadiana sy antoko tokana, ka tsy misy mahazo manohitra ny tao Mozambika. Dikan’izany dia atao ohatry ny tany ny zavamisy eto, vita fifidianana vao tanterahana ny fampihavanana. Ny fanonganam-panjakana hoy Constant dia tsysaziana fa ny tsy manaiky ny fifidianana no saziana. Ny Ct Sazalahy Tsianihy dia nilaza fa manana soatovina ny Malagasy , ny ray amandrenin’ny movansy Ravalomanana dia manohana ny FFKM amin’ny fanohizana ny fampihavanana hivoahana amin’ny krizy. Miantso ny hery rehetra sy ny mpanelanelana hoy izy hanaja ny soatoavina Malagasy. Ny Cst Rodin dia nanambara fa nanomboka tany Maputo I sns no efa nanaraka izany ny movansy Ravalomanana. Ny zavamisy hoy izy dia tsy notanterahana ny tondrozotra, izay misy firenena roa no miaraka amin’ny mpitondra fat. Ny hevitry ny movansy Ravalomanana hoy Rodin dia aleo ravana ny tondrozotra, fa ao anatin’ny andrimpanjakana aza tsy manaja azy. Miangavy ny FFKM izahay hanohy ny fampihavanana. Aleo ny Malagasy no hanao ny hahatsara azy. Ankoatra izay dia nisy ny fanontaniana nataon’ny mpanao gazety.
Mbola mahatoky ny lehiben’ny movansy Ravalomanana Mamy Rakotoarivelo ve ianareo?
Nanambara ireto pralemantera ireto fa mahatoky ny lehibeny izy ireo. Ny kandidànay Lalao Ravalomanana hoy Mamy Tiana dia nanao fanambarana fa n’inon’inona zavatra niseho eto dia aleo aloha ho vita ny fanadinana bakalorea. Mifanmeno ny zavatra nambaran’ny lehiben’ny movansy sy izay fanambarana izay.Tsy fanapahan-kevitra azy irery iny fa niarahanay rehetra. Manomboka izao dia misy fanapahan-kevitra horaisin’ny movansy amin’ny dingana ataofa tsy hoe fifandirana akory. Tsy maintsy hihetsika ny movansy Ravalomanana hoy izy fa ny tanjona dia hoe misy fifidianana, malalaka, ao anatin’ny fitoniana.
Raha hisy fanovana governemanta atsy ho atsy dia ahoana ny hevitry ny movansy Ravalomanana?
Izahay dia mahatoky ny lehiben’ny delegasionan’ny movansy Ravalomanana heo rehefa miala dia miala, na mijanona dia mijanona. Tsy vao izao no namoaka daty ny Ceni-T fa efa inefatra ka ho hita eo raha hahatanteraka izany izy ireo. Vao nandeha ny feo hoy izy ireo fa hajanona ireo kandidà telo dia najanon’ny Ceni-T ny fanontana ny biletàn’izy ireo. Dikan’izany dia manao politika ny Ceni-T. Tany am-piandohana milaza fa vonona ny lafiny teknika kanefa aty aoriana manao fomba fitenin’ireo fikambanana iraisam-pirenena.
Naka toky tamin’ny sehatra iraisam-pirenena ny movansy Ravalomanana tamin’ny voalohany kanefa voatsipaka foana?
Niezaka ny movansy Ravalomanana nitazona ny ara-dalàna ary hatramin’izao dia manaraka ny tenin’ny mpanelanelana saingy taty aoriana dia izy nametraka ny lalàna indray no manitsakitsaka izany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 23 août 2013 Catégories Politique
11 pensées sur “PARLEMANTERA MOVANSY RAVALOMANANA : Tsy hakatoavan’ny rehetra io fifidianana io”
Ny tokony ataonareo CT CST Ministres zanak’i dada de miala izao de izao! aminizay de tsy misy ny fifidianana eo fa ra mbola eo nareo de efa manaiky izany matoa mipetraka eo! izay ihany ny vahaolana haingana sy akaiky aloha hatreto mialà nareo ao !
TOA MITENITENY FOANA IANAREO ,NISY NANKATOA VE NY REFERENDUM 2010 DIA IZAO 2013 tahaka ny ondry nandra ianareo nanaraka io lalampanorenana i andry Rajoelina io .
RAHA ENDRY IANAREO DIA HATOMPBOHY NY DESOBEISSANCE TARIHO NY VAHOAKA HIKOMY HANADBOKA AN DRAJOELINA ,HIKOMY HOY AHO HANADABOKA AN DRAJOELINA…/..
Ekeko ny tenin’i Michel, fa izao koa:
1- Mila mpitarika manana charisme ny movansy Ravalomanana
2- Mila manao action bien organisée
3- Mila mihenjana amin’izay
4- Mba mihainoa radio ianareo mpitarika ireo, ny radio rehetra misy eto Antananarivo, dia henoy tsara ary ataovy ny statistique fa ny 97% n’ny olona dia mila action avokoa, mila midina an-dalambe, izay sisa no vahaolana,
5- Ajanony ny fifampiraharahana fa tsy nitondra nankaiza izany nandritra ny 4 taona
Ary farany, aza manao ny malagasy ho nandra ianareo fa efa leo izy io, ka sao ianareo diso paika eo ka hifoteran’ny rambony.
Miala ianareo ao amin’io fitondrana io, izay vao mandeha ny fitokonam-bahoaka. Raha mbola ao ianareo Movance R8 dia kely finoana aho raha ahazo olona betsaka. MILA IANAREO CT, CST, MINISITRA SNS…
Ny an’i Deba e! » za tsy hiala »
Mety amintsika izao kah!!
« Hainareo ny lalana niditra dia hainareo koa ny lalana mivoaka » hoy dada.
Mba tė aheno ny feonao izahay Dada a!!ahoana ny hevitrao @’izao fandehan-javtra izao??.
fantatray koa fa miasa mafy ianao koa mahereza dada a!!
Exigeons avec vigueur l’application et le respect du droit de l’Homme et du Citoyen notament les sitipulations des trois alinéas de l »Article 21
Nous devons pas accepter ce diktat ,qui est nul et non avenu !
ESTONS SANS ATTENDRE
Ra Celestin o! leo ny vahoaka ,mila hetsika mahery ny vahoaka.
KA MANOMBOKA @ DESOBEISSANCE IZANY -ka ireo ao anaty SYST2ME no Hanomboka ny DESOBEISSANCE AN I PT (président de Transition ) hoy tribune izay !
23 août 2013 à 21 h 11 min
MOSE michel , Leo anao miteny eto nefa tsy mitsefotra ,tsy misavaona..!
koa nahoana moa tsy ianao no mitarika ny rotaka ,dia ho hita ny fahaizanao ,ny kirinao ,ny herinao !
Fa aza ny hafa no omenao tsiny..
Haseho izato herinao !
Tsy miantso ny olona hirotaka ny Antony anoratako sy any an-kafa fa manazava amin’ny mpamaky..Ka na iray na roa monja ny mamaky dia izay ny rotaka ataoko !
Izay ny anjara birikiko !
Rangahy Celestin o!
Volambahoaka no nanakaramaina ireo tafiditra tao @ systéme ,ny zavatra tsy hazo lavina atramin izao dia ,Nikatso daholo ny tetika havolenta novohizinizireo ,Ka fialan nenina no hagatahako azy ireo HITARIKA NY VAHOAKA HANAO NY DESOBEISSANCE KA IZY IREO NO HANOMBOKA IZANY ANY @ TOERAM PIASANY ANY AVY ARY DIA VAHOAKA NO HENTANINA MIARAKA @ IZANY .
MILa zava hazo tspaitanana ny Vahoaka .
Ny vahoaka dia vonona ny nihetsika fa ny leader no nanapodrano atrany .
Ka momba ny tenako dia aza matahotra ianao ….
23 août 2013 à 22 h 29 min
Tsy hitako izay ilaina anreo. Tsy nanao inon’inona afatsy ny nanindrona antsy avy aty aoriana an’i Marc Ravalomanana mivady.
Miàlà tao fa maharikoriko. tsy misy ilaivana azy daholo
Tarito ny rotaka mba hahazoana mameina ny volam-bahoaka
arosoy ny adinao ho tehafanay e! Sa ny vava sy ny geste ihany no hanao ,toa ny alika ao anatin’ny tranpny :wawawawa ,fa aty ivelany ,miforon-drambo ?
Mila fifandinihan’ny maro ,mila fandaminana , mila mpitarika vonona sy mahefa , mila » jomaka » ,mila vola ny rotaka…fa tsy vitan’ny wawawa fotsiny !
Précédent Article précédent : FFM : Basin’ariary fito
Suivant Article suivant : RAKOTOMIANDRISOA JEAN ERNEST : Tsy kandidà intsony no resahina fa mila Dada tonga eto isika